ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ Certified
Ethical Hacker FULL Course PDF
တွေရထားလိုShare ပေးလိုက်ပါတယ်။ Ebook တွေကတော့စုစုပေါင်း 21 အုပ်ပါ။ Full
Course ဆိုတဲ့အတိုင်း Module တစ်ခုချင်းဆီ
သီးသန့် ထုတ်ထားထားပါ။ စာအုပ်ထဲ့မှာ Introduction to Ethical Hacking ၊ Footprinting
and Reconnaissance ၊ Scanning
Networks ၊ System Hacking၊ Sniffing
၊ Social Engineering ၊ Hacking Wireless Network ၊ Denial of Service စတဲ့ Module တစ်ခုခြင်းဆီ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အောက်မှာ
Ebook ရဲ့ Moudule တွေနဲ့ Ebook Download Link တွေတွဲထားပေးပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ Examဖြေသူများကတော့ CEH
v9 ကိုဖြေနေရတာပါ။ CEH v8 ကိုလေ့လာရင်လဲ Exam ဖြေမယ့်သူကော Self Study
သမားတွေအတွက် ကော အများကြီးအထောက်အကူပြူပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တဲ့ EBook
အသစ်တွေ့လေ့လာပြီး ကောင်းကောင်း အသုံးချနိုင်ရင် ကျေနပ်ပါပြီးဗျာ။မိတ်ဆွေများအားလုံး
2016 နှစ်သစ်မှာ 100% စိတ်ရောကိုယ်ပါ အကြံသစ် ဥာဏ်အသစ်တွေနဲ ကျန်းမာ ပျော်ရွင်ကြပါစေခင်ဗျာ။
& Download 1. CEHV8
Module 01 Introduction to Ethical Hacking.pdf
Module 02 Footprinting and Reconnaissance.pdf
Module 03 Scanning Networks.pdf
Module 04 Enumeration.pdf
Module 05 System Hacking .pdf
Module 06 Trojans and Backdoors.pdf
Module 07 Viruses and Worms.pdf
8. CEHv8 Module 08 Sniffing.pdf
Module 09 Social Engineering.pdf
Module 10 Denial of Service.pdf
Module 11 Session Hijacking.pdf
Module 12 Hacking Webservers.pdf
Module 13 Hacking Web Applications .pdf
Module 14 SQL Injection.pdf
Module 15 Hacking Wireless Network
Module 16 Hacking Mobile Platforms.pdf
Module 17 Evading IDS, Firewalls, and Honeypots.pdf
Module 18 Buffer Overflow.pdf
Module 19 Cryptography.pdf
Module 20 Penetration Testing.pdf
ko zaw aungJanuary 7, 2016 at 11:51 PMThank So Much Sir.!ReplyDeleteThuYeinTun(Noor Muhammad)January 19, 2016 at 12:14 PMတခြားဒေါင်းလုပ်လင့်ခ်လေးကနေပြန်တင်ပေးရင်ကောင်းမယ်. ဒေါင်းရတာအဆင်မပြေလို့ပါ။ReplyDeleteTHET HTAR ZinJuly 28, 2016 at 5:16 PMhihihi ,i would like to know where can i join the CEH Training Course?ReplyDeleteAdd commentLoad more...
Ubuntu 15.04 Server with system & Administration a...
Mastering VMware vSphere6လေ့လာချင်သူများအတွက် EB...
CompTIA Network+ Certification Study Guide, 6th Ed...
Certified Ethical Hacker FULL Course PDF | CEH v8 ...
Computer Service သမားတွေအတွက် Windows ပြန်တင်စရာမလ...